LG G6 mini ga-abụ eziokwu n'oge na-adịghị anya ọ bụ ezie na aha LG Q6 | Akụkọ akụrụngwa
LG G6 mini ga-abụ eziokwu n'oge na-adịghị anya ọ bụ ezie na aha LG Q6
Ọ na-a ọnwa ole na ole ebe ọ bụ na anyị na eze zutere LG G6 n'ime usoro nke Mobile World Congress nwere na Barcelona, ​​ma ugbu a ọ dị ka nwanne ya nwoke nke obere, nke a maara dị ka LG G6 mini, ma nke ikpeazụ ga-baptizim LG Q6. N'ezie, ọ bụ karịa karịa na anyị agaghị ahụ ya na Europe.
Ma ọ bụ na dị ka ọtụtụ ntapu, ụlọ ọrụ South Korea na-ezube ire igwe mkpanaka a naanị na China na India, mba abụọ na - apụta ebe LG G6 dị oke ọnụ maka ọtụtụ ndị ọrụ.
N'oge a enweghi otutu nkọwa banyere LG Q6 ọhụrụ a, ọ bụ ezie na ọzọ Evan Blass a ma ama ewepụtara ụfọdụ nkọwa ya, ka ekwenyebeghị. Ihuenyo nke 5.4-anụ ọhịa nwere ihuenyo nke ga-etinye 80% nke n'ihu, 3GB RAM na azụ ya, anyị ga-ahụ otu igwefoto nwere ihe mmetụta 13-megapixel.
O doro anya na nke ahụ Anyị ga-eche ihu na ngwaọrụ mkpanaka dị ala karịa LG G6, ọ bụ ezie na a ga-eche na ọnụahịa ya ga-ebelata ka mbelata akụ na ụba akwụ ụgwọ dịka ọmụmaatụ nbelata ihuenyo, ọnwụ nke igwefoto abụọ ma ọ bụ Mbelata nke RAM na nchekwa dị n'ime.
Ugbu a, anyị ga-eche ka LG gosipụta LG Q6 ọhụrụ iji mara njirimara ya na nkọwa ya, na mgbakwunye na ọnụahịa ya, nke bụ otu n'ime nnukwu ihe amaghị ama iji dozie.
Ichere na anyi choro LG G6 mini na ahia?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » LG G6 mini ga-abụ eziokwu n'oge na-adịghị anya ọ bụ ezie na aha LG Q6
Ndị spinners nwere obi ụtọ na-enwukwa ọkụ
SPC na-emegharị mbadamba nkume ya ma malite usoro ọdịyo maka oge ọkọchị